စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
Surface ကပစ္စည်း: Hard anodized ။
1. သိုလှောင်ဆင် & များအတွက်တောင်တော်အမွေးဒီဇိုင်း။
AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ၏ 2. Indicator သည်။
3. pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆများအတွက်ထိပ်တန်း / ခြမ်း mounting စံ။
4 ။နှစ်ဦးအားလွတ်လပ်သောပြင်ပခရီးသွားရပ်နား Adjustments နှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက် +/- 5Â°၏လွယ်ကူပြီးတိကျသောညှိနှိုင်းမှုခွင့်ပြုသည်။ ဒါဟာညှိနှိုင်းမှုဖြစ်စေဖွင့်သို့မဟုတ်တံခါးပိတ်အနေအထား လုပ်. တိကျမှုအဆို့ရှင် alignment ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
AOX-P ကိုများအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အောက်မှာ pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင်စီးရီးစက်မှုဇုန်ကို double အခြေအနေများ 20% -30% ဖြစ်ပါတယ်။
အဆို့ရှင် = 100N.m ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့် torque
အဆိုပါ torque ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် (1 + 30%) = 130N.m စဉ်းစား
Air Supply = 5Bar
အထက်ပါဇယားအရကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည် မော်ဒယ် DR00150 ဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းနမူနာပေးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီး ကောင်းစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောအသေးအမိန့်ကိုထုတ်လုပ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲရှိပါတယ် သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့အဆင်သင့်။
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory ပို actuator အတွက်အထူးပြုများမှာ နှစ်ပေါင်း 20 ထက် Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်မှာ, တရုတ်။
မေး: နိုင်သလား ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-P ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှု pneumatic rotary actuator သရုပ်ဆောင်စီးရီးစက်မှုဇုန်နှစ်ဆ?
Q: ငါသည်လက်ျာစက်မှုဇုန်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် ငါတို့အဘို့အ pneumatic rotary actuator?
A: ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောပါဝါအဖြစ်သင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ, ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား, torque တန်ဖိုးကိုကျနော်တို့အသင့်တော်ဆုံး actuator ရွေးမည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်။
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်